५ नं. प्रदेशको रूकुम पूर्वमा... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
५ नं. प्रदेशको रूकुम पूर्वमा माओवादीको क्लिनस्विप
नारायण खड्का दाङ, मंसिर २२
प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतको एउटा नयाँ जिल्ला रूकुम पूर्वमा नेकपा माओवादीले क्लिनस्विप गरेको छ। पूर्वी रूकुममा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरि तीन वटै स्थानमा जित निकालेका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कमला रोकाले निकटतम प्रतिद्धन्दी नेपाली कांग्रेसका हरिशंकर घर्ती मगरलाई ६ हजार २८ मतअन्तरले पराजित गरेकी हुन्। रोकालाई १० हजार ४ सय ३४ मत प्राप्त हुँदा घर्ती मगरलाई जम्मा ४ हजार ४ सय ६ मत मात्रै प्राप्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
रूकुम पूर्वका दुई वटै प्रदेशसभा सदस्यमा समेत माओवादी केन्द्रकै उम्मेदवार विजयी भएका छन्। रुकुम पूर्वको क्षेत्र १ मा तेजबहादुर वली ‘प्रतिक’ले ५ हजार ४ सय २७ मत प्राप्त गरि निर्वाचित भएका छन् । उनका निकतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका दुतकुमार पुनले २ हजार १ सय ४४ मत प्राप्त गरेका थिए।
त्यस्तै प्रदेशसभा २ मा माओवादी केन्द्र कै पूर्णबहादुर घर्ती ‘आयाम’ ले ५ हजार ८ सय १६ मत प्राप्त गरि विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका दत्तबहादुर बस्नेतले ३ हजार १ सय ११ मत प्राप्त गरको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। स्थानीय निकाएको निर्वाचनमा पनि यहाँ माओवादी केन्द्रले क्लीन स्वीप गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २२, २०७४, १०:३४:१०